Hatfield MP Tapiwa Mashakada dumps Chamisa for Khupe faction - The Zimbabwean
Tapiwa-Mashakada dumps Chamisa for Khupe MDC Hatfield MP Tapiwa Mashakada is reported to have crossed the line to the Thokozani Khupe faction. Sources close to the situation have confirmed that Mashakada one of many MDC Alliance MPs who has dumped Chamisa for Khupe.
The opposition party has been under siege from the Zanu PF government since the lockdown started. Mnangagwa is believed to be talking advantage of the lockdown to forcibly change the leadership of the MDC Alliance through abductions and abuse of the courts. Recently, MDC-T leaders performed rituals at Morgan Tsvangirai grave and pleaded with the deceased to help them defeat MDC Alliance leader Chamisa who scored over 2 million votes during the 20118 elections.